Waa tuma Taliyaha NISA ee Aadan Cadde? [Xaaska Jacfar] | KEYDMEDIA ENGLISH
Waa tuma Taliyaha NISA ee Aadan Cadde? [Xaaska Jacfar]
Xaaska Guddoomiyihii hore ee degmada Deyniille, Xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar, ayaa loo magacaabay Taliyaha NISA ee Garoonka Aadan Cadde, saddex bil kadib markii laga raacdeeyay hoggaanka barista NISA.
MUQDISHO, Soomaaliya – Taliyahii hore ee hoggaanka baarista hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka [NISA] Col. Xamdi Xasan Maxamuud, ayaa loo magacaabay Taliyaha NISA ee Garoonka Aadan Cadde, kadib markii xilkaas laga xayubiyay, Khadar Maxamuud (Khaddar Sanka), bartamihii bishaan dhamaanka ah ee May 2022.
Keydmedia Online, ayaa 19 May 2022, baahisay in Khaddar Sanka, oo ahaa shaqsiga Fahad iyo Farmaajo u qaabilsan dhibaateynta shacabka iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee adeegsanayay garoonka diyaaradaha, laga raacdeeyay shaqada, kadib isku dayo uu ku doonayay inuu carqaladeeyo howlihii doorashada bartamihii bishaan.
Agaasimaha Cusub ee NISA, Mahad Maxamed Salaad, ayaa xilkaas u magacaabay, Korneel Xamdi Xasan Maxamuud [Carabow], oo bishii March ee sanadkaan, sababo la xariira beegsi siyaasadeed, ku weysay xilka hoggaanka barista NISA, kadib isku shaandheyn uu sameeyay eedeysane Yaasiin Farey oo ku magacaawnaa ku simaha Agaasimaha NISA.
Xil ka raacdeyntaas kadib, Col. Xamdi, waxa baahisay qoraal ay ku sheegayso in ay ka tagtay shaqadii hay’adda, iyadoo Yaasiin Farey ku eedeysay inuu ku shaqeynayo hannaan aan waafaqsaneyn nidaamka iyo sharciga dalka u yaalla, waxayna xustay in aysan diyaar u ahayn in ay qeyb ka noqoto ku tagri-falka awoodeed ee hoggaanku wado.
Waxaa xusid mudan in is-baddelka uu Yaasiin Farey ku sameeyay, Taliyaha Ciidanka Waran, Hoggaanka Baarista NISA, Taliyaha NISA ee Gobolka Banaadir iyo Taliyaha Ciidanka Ilaalada, uu dhacay 17-kii March 2022, halka ay Xamdi waraaqdeedu ku taariikheysan tahay 4-tii March 2022, inkastoo la baahiyay maalin kadib isku shaandeynta.
Keydmedia Online, waxa ay xasuusataa in xil ka qaadista uu Farey ku sameeyay Col. Xamdi, ay sababtay khilaaf xooggan, kaasoo ka dhex qarxay RW Rooble iyo hoggaanka KMG ahaa ee hay’adda, inkastoo aan wax xal ah loo helin, taasoo keentay in Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta uu xafiiskiisa keeno Xamdi, sababo amni awgood.
Xamdi Xasan Maxamuud, waxa ay 13 sano ka tirsaneyd laamaha amniga, waxayna muddo ku soo shaqysay xilka hoggaanka baarista hay’adda, waa xog-ogaal, wax badan ka og gabood-falladii ay magaca NISA ku galeen Fahad Yaasiin, Kullane Jiis iyo Yaasiin Farey, waxaana la rumeysan yahay in ay billowgii March 2022 ka badbaadday dil qorsheysan.
Col. Xamdi, waa xaaska Guddoomiyihii hore ee degmada Deyniille, Xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar, halka ay qaraabo dhaw la tahay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxayna dadka yaqaanna ku sheegaan shaqi af-gaaban oo shaqadeedu badan tahay, ad-adag, oo go’aanadeeda ku saleysa baaris rasmi ah.
Dhanka kale, Khadar Maxamuud (Khaddar Sanka), oo ah sarkaalka laga qaaday xilka loo magacaabay Xamdi ee Taliyaha NISA ee Garoonka Aadan Cadde, ayaa ku jira saraakiil ay durba ku socdaan baaritaanno, lagana yaabo in la hor geeyo garsoorka, maadaama uu si weyn dadka ugu dhibaateyn jiray garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.